काेराेना खाेपकाे मूल्य कति सम्म पर्ला ? « Janasahara
काेराेना खाेपकाे मूल्य कति सम्म पर्ला ?
भाद्र २१ काठमाडौ – विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार अहिले विश्वमा ३४ कम्पनीले कोरोना खोप बनाइरहेका छन् । तीमध्ये अहिलेसम्म सातवटा मात्रै तेस्रो अर्थात् अन्तिम चरणको ‘क्लिनिकल ट्रायल’ (परीक्षण) सम्म आइपुगेका छन् । यस्तै तीनवटा खोप दोस्रो चरणको परीक्षणमा छन् । यस्तै विश्वका अन्य १४२ कम्पनीले पनि कोरोना खोप बनाइरहेका छन् र ती अहिले प्रि-क्लिनिकल चरणमै रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ ।
संगठनका प्रमुख वैज्ञानिक सौम्या स्वामिनाथनले अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले विकास गरेको तथा एस्ट्रजेनेका कम्पनीले ठूलो मात्रामा उत्पादन गरिरहेको खोप अहिलेसम्म सबैभन्दा उन्नत देखिएको बताएका छन् । उनले खोप सन् २०२१ को मध्यसम्ममा बजारमा उपलब्ध हुने अनुमान गरेका छन् ।
खाेप उत्पादक कम्पनी अनुसार मूल्य फरक फरक
एस्ट्रजेनेका कम्पनीले आफूले नाफा नकमाउने र सकेसम्म सस्तोमा खोप उपलब्ध गराउने कोसिस भइरहेको जनाएको छ । यसका प्रमुख प्रमुखले ल्याटिन अमेरिकामा खोपको मूल्य प्रतिडोज ४ डरलभन्दा कम नै हुने बताएका छन् ।
भारतमा ठूलो मात्रामा यो खोप उत्पादन गरिरहेको सिरम इन्स्टिच्युटले भारत र अन्य विकासशील मुलुकम यो खोपको मूल्य ३ डलर (नेपाली ३५२ रुपैयाँ) पर्ने जनाएको छ ।
इटलीको स्वास्थ्य मन्त्रालयले युरोपमा यो खोपको मूल्य प्रतिडोज २.५ युरोसम्म पर्ने जनाएको छ ।
यो खोप उत्पादनका लागि अस्ट्रेलियाले एस्ट्रजेनेकासँग सम्झौता गरिसकेको छ भने त्यहाँका प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले आफ्ना सबै नागरिकलाई खोप निःशुल्क उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएका छन् ।
फ्रान्सस्थित सनोफी कम्पनीका प्रमुख ओलिवियर बोगिलोटले आफ्नो कम्पनीले बनाएको खोपको मूल्य प्रतिडोज १० युरो (नेपाली १४४० रुपैयाँ) भन्दा कम हुने बताएका छन् ।
चिनियाँ औषधि कम्पनी साइनोफार्मका प्रमुख लिउ जिङजेनले आफ्नो कम्पनीले विकास गरेको खोपको तेस्रो चरण परीक्षण पूरा भइसकेको बताएका छन् । उनले यसको दुई डोजको मूल्य १००० चिनियाँ युआन (नेपाली १६ हजार रुपैयाँ) भन्दा केही कम हुने जानकारी दिएका छन् । स्वास्थ्यकर्मी र विद्यार्थीलाई भने खोप निःशुल्क दिने तयारी रहेको बताइएको छ ।
क्याम्ब्रिजस्थित मडर्ना कम्पनीले आफूले उत्पादन गरेको खोप महामारीलाई विचार गरी प्रतिडोज ३३ देखि ३७ डलरसम्म (नेपाली रुपैयाँ ४ हजार) सम्म पर्ने जानकारी दिएको छ । कम्पनीका कार्यकारी प्रमुख स्टिफन बान्सेलका अनुसार खोपको मूल्य सकेसम्म कम गरिनेछ । महामारीका बेला मूल्यकै कारण कसैले खोप नपाउने अवस्था सिर्जना नगरिने उनले आश्वासन दिएका छन् ।
फायर्सफार्माका अनुसार फाइजर र बायोएनटेक कम्पनीले आफूहरूले अमेरिकी सरकारलाई खोप प्रतिडोज १९‍.५० डलरमा बिक्री गर्ने बताएका छन् । यो खोप मानिसलाई सुरुवातमा दुई डोज र पछि बुस्टर डोज दिनुपर्ने हुन्छ, जसका लागि प्रतिव्यक्ति ४० डरलसम्म पर्न सक्नेे उल्लेख छ ।
खुला विज्ञापनकाे निर्णय विरुद्ध करार स्वास्थ्यकर्मीकाे विराेध
निर्मलाको लागि उठाएको रकम अभियान्ताद्वारा हस्तान्तरण, आवश्यक रकम अपुग सहयोगको लागि अपिल